ကြက်ဘဲအစာအတွက်ကြက်၊,ရောင်းချရန် pelletizer စက်
စိုက်ပျိုးရေးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်သစ်သားအကြွင်းအကျန်များကိုအပူနှင့်ချက်ပြုတ်ရန်အတွက်သစ်သားလုံးလေးများအဖြစ်ပြောင်းလဲရန်သို့မဟုတ်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အစာတောင့်များပြုလုပ်ရန်ကြက်အစာတောင့်စက်ကို ၀ ယ်ရန်သင့်လျော်သည်။, သငျသညျသစ်သားအကြွင်းအကျန်များစွာသောအရေအတွက်ရှိပါက; သို့မဟုတ်သင်၌ကြီးမားသောလယ်ယာတစ်ခုရှိပြီးသင်စွန့်ပစ်ရန်စိုက်ပျိုးရေးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများစွာရှိသည်; ဒါမှမဟုတ်မင်းကတိရိစ္ဆာန်တွေမွေးလာတဲ့လယ်သမားတစ်ယောက်ပါ, ကြက်သားလို, duck, သိုး, ကျွဲနွားသို့မဟုတ်ဝက်, စသည်တို့,ဒီကြက်ဘဲအစာတောင့်လုပ်နိုင်တဲ့စက်ကအထူးကြက်၊. ဤဒီဇိုင်း၏အားသာချက်များမှာလျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုနည်းပြီးအစာတောင့်များထုတ်လုပ်ရာတွင်အကျိုးရှိသည်. ဤသယ်ဆောင်နိုင်သောကြက်ဘဲအစာတောင့်စက်သည်ပြောင်းကိုပြုပြင်နိုင်သည်, ပဲမျိုးစုံ, ကောက်ရိုး, မြက်နှင့်ဆန်အခွံအမှုန့် granulated လုံးလေးများသို့. ကြက်သားအစာတောင့်ကိုကြမ်းခင်းမြေပေါ်မှာတင်ပြီးအစာကျွေးဖို့ပါးစပ်ထဲထည့်လိုက်တယ်, ထို့နောက်ပစ္စည်းသေမှိုနှင့် roller အကြားပွတ်တိုက်အားဖြင့်သေတွင်းထဲသို့ဖိလိမ့်မည်. အစာကျွေးသည့်အတောင့်များပြုလုပ်ရာတွင်အများအားဖြင့် die နှင့် roller အကြားကွာဟချက်မှာ ၀.၁-၃.၃.၃ မီလီမီတာဖြစ်သည်. အစာတောင့်အရှည်ကိုဖြတ်တောက်သောဓားဖြင့်ချိန်ညှိနိုင်သည်. သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောအချင်းတွင်းနှင့်အတူ feed ကိုလုံးလေးများလုပ်ပြားချပ်ချပ်ကိုအစားထိုးနိုင်ပါတယ်. အတောင့်သေဆုံးပြီးနောက်ကာလများအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်, သင်ကမီးဖိုကိုဖွင့်ခြင်းနှင့်အလုပ်လုပ်ဆက်လက်နိုင်ပါတယ်.
ဤကြက်ဘဲအစာတောင့်စက်ကိုအစာတောင့်ပြုလုပ်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည်, လောင်စာတောင့်များနှင့်အိမ်မှာတိရိစ္ဆာန်အိပ်ယာလုံးလေးများ, လယ်ယာတွင်သို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့လုံးလေးများအပင်၌တည်၏. ပုံပြထားတဲ့အတိုင်း, လောင်စာလုံးလေးများကိုအိမ်တွင်းချက်ပြုတ်ခြင်းနှင့်အပူပေးခြင်းအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်; အစာကျွေးတောင့်တိရိစ္ဆာန်နို့တိုက်ကျွေးရေးအဘို့ဖြစ်ကြ၏.
အစပစ္စည်း: Straw, ရှိပါတယ်, ကျောက်စိမ်း, နှင့်အခြားအစာကျွေးပစ္စည်းပစ္စယ (ကုန်တယ်)
အသုံးပြုမှု: တိရိစ္ဆာန်အစာအဖြစ်, တိရိစ္ဆာန်အိပ်ယာ
အရောအနှော: တိုက်ရိုက်ရောနှော (အစိုဓာတ်ပါဝင်မှု:12-15%)
အစပစ္စည်း: ချေး, ကောက်ရိုး / မြက်ပင် (ကုန်တယ်)
အရောအနှော: ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ညီမျှသောအချိုးအစား (စုစုပေါင်းအစိုဓာတ်ပါဝင်မှု: 12-15%)
ကြက်အစာကျွေးသည့် Pellet စက်ကိုမစတင်မီဘာလုပ်ရမည်နည်း?
2. အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအပူချိန်၌လုံးလေးကိုကြိတ်ခွဲခြင်းမပြုရ 10 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်.
ခ. စမ်းသပ်မှု Run ကို
လုံးလေးများမထုတ်လုပ်မီ, သေသွားစေရန်ချောမွေ့စေရန်အရေးကြီးပါသည်. ဒီလိုလုပ်ဖို့, သငျသညျ 5kg မုန့်ညက်ကိုပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်, 5ဒဏ်ငွေသဲနှင့်ကီလိုဂရမ် 1.5 လီတာဟင်းရွက်ဆီ, ထို့နောက်ပါဝင်ပစ္စည်းများတစ်ပုံးသို့ရောမွှေပါ. နောက်တစ်ခု, အဆိုပါလုံးလေးစက်ကိုစတင်ပါ, ထို့နောက်သင့်လျော်သောရောနှောထားသောပစ္စည်းများပမာဏကိုကြက်ဘဲအစာတောင့်ကြိတ်စက်ထဲသို့ထည့်ပြီးသေတွင်းထဲသို့ဖြတ်ထည့်ပါ. ဒီဟာကိုအကြိမ်ကြိမ်လုပ်သင့်တယ် 40-60 မိနစ်များ.
ဂ. ပထမ ဦး ဆုံးပြေးမီ, အားလုံးဝက်ဝံချောဆီကိုမှအမဲဆီချမှတ်. ငှားရမ်းခမှာအော်ပရေတာတစ်ကြိမ်လုပ်ဖို့လိုသည် 10 နာရီ.
: D. roller ဘီးများအတွက်ဖိအားကိုသတ်မှတ်ပါ. ဒီလိုလုပ်ဖို့, သေရုံကိုဆွဲယူပြီး၎င်းသည် roller များအောက်တွင်လှည့်နိုင်ခြင်းရှိမရှိကိုရှာဖွေပါ. roller နှင့် die အကြားကွာဟမှုကို 0.1-0.3mm အတွင်းထိန်းချုပ်သင့်သည်.